Sida loo isticmaalo xaashida xaashida ee Excel?
Posted by Tranquillus | Apr 7, 2022 | Shabakada
Waxaan guud ahaan ugu yeernaa faylal kasta oo Excel ah xaashida faafinta. Waa faa'iido leh in la fahmo in xaashida xisaabaadka ee Excel uusan ka duwanayn xaashida. Xaashiyaha xisaabaadka ee software-ka Excel ayaa runtii kuu fududayn kara hawlo maalmeed qaarkood, guriga iyo ganacsigaaga labadaba.
Maqaalkan, waxaan ku bari doonaa sida loo isticmaalo qaar ka mid ah fikradaha aasaasiga ah ee qalabka.
Waa maxay xaashida xaashida ee Excel?
Xaashida shaqadu waa tab ku jirta faylka Excel.
Waxaa laga yaabaa inaad ogtahay in mid ka mid ah xirfadaha loogu baahan yahay maalmahan shirkadaha ay tahay heerka sare ee Excel, laakiin waxaan kuu xaqiijin karnaa in barashada dhammaan hawlaheeda ay u baahan tahay waqti iyo wax ka sarreeya dhammaan awoodaha.
Si aad u abuurto xaashida faafinta ee Excel, marka aad horay ugu jirtay interface-ka Excel, kaliya geli tab cusub. Waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka aad ku isticmaali karto furaha gaaban ee kiiboodhka Shift + F11 ama dhagsii "+" ee ku xiga magaca xaashida shaqada.
Sida loo dhex maro go'yaasha dhexdooda?
Sida caadiga ah waxaanu haynaa dhowr kayd ama macluumaad kala duwan, kuwaasna waa in lagu dhejiyaa tabsyo kala duwan ama xaashida faafinta si loo fududeeyo habaynta shaqada. Si aad u dhex marato tabsyada ama xaashida, waxaad ku dhufan kartaa tab kasta oo ka mid ah si aad u furto, ama isticmaal furaha CTRL + PgDn si aad hore ugu socoto ama CTRL + PgUp si aad dib ugu noqoto.
Marar badan waxay ahayd inaad ku balaadhiso jadwal isku mid ah xaashiyo shaqo oo kala duwan halkaasoo xogtu ku kala duwan tahay. Xaaladdan oo kale aad ayey ugu badan tahay dadka ka shaqeeya baaritaannada xilliyeedka (maalin kasta, toddobaadle, bil kasta). Sidaa darteed waa muhiim in la ogaado sida loo habeeyo si macluumaadka qaarkood si fudud loo heli karo.
READ Maqnaanshaha jirrada ee ku xiran Covid-19: nasinta cusub ee shuruudaha xaq u yeelashada magdhawga
Sidee loogu dabaqaa midabada xaashida?
Markaad la shaqaynayso tabs/sheetooyin badan, hal ikhtiyaar oo lagu kala saaro meelaha la xidhiidha, ama xitaa muuqaal ahaan loo kala saaro xog kasta oo kala duwan, waa in la isticmaalo midabyo kala duwan shay kasta. Si tan loo sameeyo, kaliya waxaad ku dhufan kartaa safka, tiirka, ama set of cells, ka dib midig-guji oo dooro "midabka buuxin", ka dibna dooro midabka aad rabto curiyaha su'aasha.
Sidee la isugu daraa waraaqaha shaqada ee Excel?
Ka dib marka aad geliso xogtaada xaashida, waxa xiiso leh in la sameeyo hawlgallo ay ka mid yihiin wadarta tirada la soo bandhigay, xisaabinta boqolleyda la isticmaalayo, iyo xog kale oo badan oo laga yaabo inaad u baahato, iyo kooxda oo geli unugyada xaashidaada.
Marka taas la sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad barato sida loo sameeyo qaacidooyinka xogta aad gacanta ku hayso. Tusaale ahaan, qiimaha badeecadaha ee xariiqa 1 ee xaashida kooban ee beertu waxay noqon doontaa wadarta qiimaha alaabta ee line 1 ee mid kasta oo ka mid ah xogta shaqada ee kooxaha, iyo wixii la mid ah macluumaadka khuseeya saf kasta iyo tiir kasta oo xaashida xakamaynta ah.
Waxa kale oo aad baran kartaa isticmaalka jaantusyada iyo garaafyada si aad si fiican ugu turjunto natiijooyinkaaga. Ujeedada garaafyada, sida magacu soo jeedinayo, waa in la bixiyo soo bandhigid garaaf ah oo xog muhiim ah, si loo arko natiijooyinka la helay.
READ Xaq miyaan u leeyahay inaan weydiiyo qof shaqaale ah tirada dhibcaha ku qoran liisankiisa wadista?
Sidee dareemeysaa markaad ogaato in Excel uu yahay shardi u ah suuqa shaqada ee maanta? Haddii aad ku wareersan tahay shaqooyinka qaarkood oo aadan aqoon sida loogu beddelo xogta macluumaadka dhabta ah ee la xidhiidha, ha welwelin, waxaad baran kartaa sida loo isticmaalo Excel si waxtar leh, xitaa waxaa jira fiidiyowyada tababarka bilaashka ah ku qoran boggayaga. Waxay ka yimaadaan dhufto ee ugu weyn ee waxbarasho.
Sida loo isticmaalo xaashida xaashida ee Excel? 7-Abriil, 2022Tranquillus
horeCaafimaadka shaqada: maxaa isbeddelaya laga bilaabo Maarso 31, 2022
socdaAragtida ANSSI ee u hijrada ka dib-quantum cryptography
Xaq miyaan u leeyahay in aan dib u dhigo wareysiyada xirfadeed sanadka 2021 aniga oo aan la i ganaaxin?
Barashada Fogaanta: Faa'iidooyinka qaaciddada cusub ee isafgaradka ah